Anyị enwere ike ịchọta ụzọ anyị gakwuru Chineke? | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Anyị enwere ike ịchọta ụzọ anyị gakwuru Chineke?
di Paolo Tescione - Septemba 9, 2020
Ọchịchọ nke azịza nye nnukwu ajụjụ emeela ka ụmụ mmadụ nwee echiche na echiche banyere ọdịdị ịdị adị nke ịdị adị. Metaphysics bụ akụkụ nke nkà ihe ọmụma na-emetụta echiche efu dị ka ihe ọ pụtara ịbụ, otu esi amata ihe na ihe bụ njirimara.
Ideasfọdụ echiche agbakọtara iji mepụta echiche ụwa nke na-ewu ewu ma gosipụta onwe ya na klaasị, na nka, na egwu na arụmụka ụka. Otu n'ime ụdị mmegharị ahụ nke nwetara traktị na narị afọ nke 19 bụ transcendentalist movement.
Principleskpụrụ bụ isi nke nkà ihe ọmụma a bụ na chi dị n'ụdị okike na mmadụ niile, ọ kwusiri ike echiche oge na-aga n'ihu. Fọdụ n'ime nnukwu mmegharị nka nke narị afọ ahụ sitere na usoro echiche a. Transcendentalism bụ ngagharị akọwapụtara site na ilekwasị anya na ụwa okike, imesi ike na mmadụ n'otu n'otu, na echiche ziri ezi banyere ọdịdị mmadụ.
Ọ bụ ezie na e nwere ụfọdụ ihe jikọrọ ụkpụrụ Ndị Kraịst na nkà nke usoro a enyela uru na nka, mmetụta ọwụwa anyanwụ ya na echiche na-enweghị isi pụtara na ọtụtụ echiche dị na njem ahụ adabaghị na Akwụkwọ Nsọ.
Gịnị bụ transcendentalism?
Movementtù transcendental ahụ malitere nke ọma dịka ụlọ akwụkwọ nke echiche na Cambridge, Massachusetts, dịka nkà ihe ọmụma gbadoro ụkwụ na mmekọrịta onye ahụ na Chineke site na ụwa eke; o nwere njikọ chiri anya ma dọpụta ụfọdụ echiche ya site na mkpakọrịta ịhụnanya na-aga n'ihu na Europe. Otu obere ndị na-eche echiche guzobere Transcendental Club na 1836 wee tọọ ntọala maka mmegharị ahụ.
Ndị a gụnyere ndị ozi Unit bụ George Putnam na Frederic Henry Hedge, yana onye na-ede uri Ralph Waldo Emerson. Ọ lekwasịrị anya na onye chọtara Chineke n'ụzọ ha, site n'okike na ịma mma. Enwere okooko osisi na nka; ihe osise nke odida obodo na nke abu ya bu uzo.
Ndị ọkà mmụta sayensị a kwenyere na onye ọ bụla dị mma karịa obere ụlọ ọrụ na-egbochi mmadụ anụ ahụ. Ka mmadụ na-atụkwasikwu onwe ya ike site na gọọmentị, ụlọ ọrụ, òtù okpukpe ma ọ bụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ka mma onye otu obodo nwere ike ịbụ. N'ime ụdị onye ahụ, e nwekwara echiche Emerson nke karịrị mkpụrụ obi, echiche nke mmadụ niile bụ akụkụ nke otu onye.
Ọtụtụ ndị transcendentalists kwenyere na mmadụ nwere ike nweta utopia, ọha mmadụ zuru oke. Fọdụ kwenyere na usoro ndị otu nwere ike ime ka nrọ a mezuo, ebe ndị ọzọ kwenyere na ọha mmadụ nwere ike ime nke a. Ha abụọ dabere na nkwenye ziri ezi na mmadụ na-adị mma. Ichekwa ịma mma nke ụwa, dị ka ime obodo na oke ọhịa, dị mkpa nye ndị transcendentalists ka obodo ukwu na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na-abawanye. Njem njem nlegharị anya na-aga n'ihu na-ewu ewu na echiche na mmadụ nwere ike ịchọta Chineke na ịma mma mara ama ama ama.
Ọtụtụ n'ime ndị klọb ahụ bụ A-Listers nke ụbọchị ha; ndị edemede, ndị na-ede uri, ndị nwanyị na ndị nwere ọgụgụ isi nabatara ụkpụrụ nke usoro ahụ. Henry David Thoreau na Margaret Fuller nakweere òtù ahụ. Womenmụ nwanyị na-ede akwụkwọ bụ Louisa May Alcott nakweere akara nke Transcendentalism, na-agbaso nzọụkwụ nke nne na nna ya na onye na-ede uri bụ Amos Alcott. Otu onye na-ede abụ abụ bụ Samuel Longfellow nabatara echiche nke abụọ nke nkà ihe ọmụma a na narị afọ nke 19.
Gịnị ka nkà ihe ọmụma a na-eche banyere Chineke?
N'ihi na ndi transcendental nakweere echiche efu na echiche nke ndi obula, onwegh echiche obula nke Chineke.
Otu ụzọ ndị transcendentalists kwenyere na ndị ụka Protestant bụ nkwenkwe ha na mmadụ achọghị onye ogbugbo iji gwa Chineke okwu. Otu n'ime ndịiche dị mkpa dị n'etiti ụka Katọlik na ụka Reformation bụ ekwetaghị na ọ dị mkpa ka onye ụkọchukwu rịọchitere ndị mmehie maka mgbaghara mmehie. Agbanyeghị, otu a ewerela echiche a gaa n'ihu, ya na ọtụtụ ndị kwere ekwe na ụka, ndị ụkọchukwu, na ndị isi okpukpe ndị ọzọ nke okwukwe ndị ọzọ nwere ike igbochi, karịa ịkwalite, nghọta ma ọ bụ Chineke. Ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị na-eche echiche mụrụ Akwụkwọ Nsọ n'onwe ha, ndị ọzọ jụrụ ya. maka ihe ha nwere ike ịchọpụta na okike.
Wayzọ echiche a kwekọrịtara na Chọọchị Unitarian, na-adabere na ya.
Dika Churchka Unitarian si gbasaa site na otu Transcendentalist, ọ dị mkpa ịghọta ihe ha kwenyere gbasara Chukwu na America n'oge ahụ. Otu n'ime ozizi ndị bụ isi nke Unitarianism, na ọtụtụ ndị otu okpukpe nke Transcendentalists, bụ na Chineke bụ otu, ọ bụghị Atọ n'Ime Otu. Jizọs Kraịst bụ Onye Nzọpụta, mana sitere n'ike mmụọ nsọ Chineke karịa Ọkpara ahụ - Chineke bụ mmadụ. Echiche a nemegide nkwuputa nke Akwukwo nso banyere uma nke Chineke; "Na mbu ka Okwu ahu diri, Okwu ahu na Chineke dikwara, Okwu ahu buru kwa Chineke. Na mbu ka ya na Chineke diri. Ihe nile ka emere site n'aka ya; mere. 4 Nime Ya ka ndu diri; ndu ahu buru kwa Ìhè nke madu. Ìhè ahụ na-enwu n’ọchịchịrị ma ọchịchịrị ahụ ejideghi ya ”(Jọn 1: 1-5).
O megidere ihe Jisos Kraist kwuru banyere onwe ya mgbe o nyere Onwe ya aha “ABU M” na John 8, ma obu mgbe O kwuru si, “Mu na Nnam bu otu” (Jon 10:30). Chọọchị Unitarian jụrụ nkwupụta ndị a dị ka ihe atụ. Enwekwara ike ịjụ ịgha ụgha nke Akwụkwọ Nsọ. N'ihi nkwenye ha nwere na nchepụta, ndị Unitarians nke oge ahụ, yana ndị Transcendentalists, jụrụ echiche nke mmehie mbụ, n'agbanyeghị ndekọ dị na Jenesis 3.
Ndị transcendentalists gwakọtara nkwenkwe ndị a jikọrọ ọnụ na nkà ihe ọmụma Ọwụwa Anyanwụ. Emerson bu ihe ederede Hindu bu Bhagavat Geeta. E bipụtara uri uri Asia na akwukwo odide transcendentalist na akwukwo ndi yiri ya. Tụgharị uche na echiche dị ka karma abụrụla akụkụ nke njem ahụ ogologo oge. Ọ bụ mmasị a n'okpukpe Ọwụwa Anyanwụ kpaliri uche Chineke gaa n'ihe okike.
Transcendentalism ọ bụ nke Akwụkwọ Nsọ?
N'agbanyeghị mmetụta ndị dị n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ, ndị Transcendentalists abụghị ndị na-ezighi ezi na okike gosipụtara Chineke. Pọl onyeozi dere, sị: “N'ihi na àgwà ya ndị a na-apụghị ịhụ anya, ya bụ, ike ebighị ebi ya na ọdịdị Chineke ya, abụwo nke ọma mara, site na mgbe ekere uwa, n'ihe nke emeworo. Ya mere enweghi m ihe ngọpu ”(Ndi Rom 1:20). Ọ dịghị njọ ikwu na mmadụ nwere ike ịhụ Chineke n ’okike, mana mmadụ ekwesịghị ife ya ofufe, ma ọ bụ na ọ gaghị abụ naanị isi iyi nke amata Chineke.
Ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị ọkachamara nke ụwa kweere na nzọpụta si n'aka Jizọs Kraịst dị mkpa maka nzọpụta, ọ bụghị ha niile mere ya. Ka oge na-aga, nkà ihe ọmụma a amalitela ịnakwere nkwenkwe na ndị ezi mmadụ nwere ike ịga Eluigwe, ma ọ bụrụ na ha ji ezi obi kwere n'okpukpe nke na-agba ha ume ịbụ ndị ezi omume. Otú ọ dị, Jizọs kwuru, sị: “Abụ m ụzọ, eziokwu na ndụ. Ọ dịghị onye na-abịakute Nna m ma ọ bụghị site na mụ ”(Jọn 14: 6). Naanị ụzọ a ga-esi azọpụta gị na mmehie ma soro Chineke nọrọ ebighi ebi n’eluigwe bụ site na Jizọs Kraịst.
Ndi mme owo ẹnen̄ede ẹfọn?
Otu n'ime nkwenkwe ndị bụ isi nke Transcendentalism bụ ịdị mma ebumpụta ụwa nke mmadụ, na ọ nwere ike imeri obere ebumpụta ụwa ya nakwa na enwere ike mezuo mmadụ ka oge na-aga. Ọ bụrụ na ndị mmadụ dị mma, ma ọ bụrụ na ụmụ mmadụ n'otu n'otu nwere ike iwepụ isi mmalite nke ihe ọjọọ - ma ọ bụ enweghị agụmakwụkwọ, mkpa ego ma ọ bụ nsogbu ndị ọzọ - ndị mmadụ ga-eme omume nke ọma ma enwere ike ịme ka ọha mmadụ zuo oke. Bible ma yehu sɛ Onyankopɔn dwen yɛn ho.
Amaokwu banyere ajọ omume ụmụ mmadụ bu pụta ụwa gụnyere:
- Ndị Rom 3:23 "n'ihi na mmadụ niile emehiewo, ha adịghị erukwa otuto Chineke".
- Ndị Rom 3: 10-12 “dị ka e dere, sị:“ Ọ dịghị onye bụ onye ezi omume, ọ dịghị, ọ dịghị otu; ọ dịghị onye na-aghọta; ọ dịghị onye na-achọ Chineke: Onye ọ bụla tụgharịrị; n'otù ka ha we ghọ ihe-efu; ọ dịghị onye na-eme ihe ọma, ọbụnadị otu. "
- Eklisiastis 7:20 "N'ezie ọ dịghị onye ezi omume n'ụwa nke na-eme ihe ọma, anaghị emehie."
- Aisaia 53: 6 “Ayi nile kpafuru akpafu dika aturu; anyị tụgharịrị - onye ọbụla - n'ụzọ nke ya; Onye-nwe atụkwasịwo ajọọ-omume nke anyị nile n’elu ya ”.
N'agbanyeghi ihe omuma nke sitere na nmeghari a, ndi Transcendentalists aghotaghi ihe ojoo nke obi mmadu. Site n'igosi ndi mmadu dika ezi okike na ihe ojoo na-eto n'ime obi mmadu n'ihi onodu ihe onwunwe ma ya mere ndi mmadu nwere ike idozi ya, o na-eme ka Chineke buru uzo nduzi di nma karia isi iyi nke omume na mgbaputa.
Ọ bụ ezie na nkwenkwe okpukpe nke transcendentalism enweghị akara nke ozizi dị mkpa nke Iso Christianityzọ Kraịst, ọ na-agba ndị mmadụ ume iwepụta oge na-atụgharị uche n'otú Chineke si egosipụta onwe ya n'ụwa, na-ekpori ndụ n'ihe okike, na ịchụso nka na ịma mma. Ndị a bụ ezigbo ihe na, "... ihe ọ bụla bụ eziokwu, ihe ọ bụla dị mma, ihe ọ bụla ziri ezi, ihe ọ bụla dị ọcha, ihe ọ bụla mara mma, ihe ọ bụla masịrị ya - ma ihe ọmarịcha ma ọ bụ otuto - chee maka ndị a ihe ”(Ndị Filipaị 4: 8).
Ọ dịghị njọ ịchụso nka, ịnụ ụtọ okike ma chọọ ịmara Chineke n'ụzọ dị iche iche. A ghaghị ịnwale echiche ọhụrụ megide Okwu Chineke ma ghara ịnabata ha naanị n'ihi na ha dị ọhụrụ. Transcendentalism emeela otu narị afọ nke ọdịnala ndị America wee mepụta imirikiti ọrụ nka, mana ọ gbalịsiri ike inyere mmadụ aka imebi mkpa ha maka Onye Nzọpụta na n'ikpeazụ ọ gaghị anọchi ezi mmekọrịta. ye Jesus Christ.